के तपाई फ्रिजमा राखेको पानी सिधै पिउने गर्नुहुन्छ ? सावधान ! तपाई यस्तो खतरनाक समस्याको शिकार बन्नुहुदैछ - ज्ञानविज्ञान
४। धेरै चिसो पानी पिउनाले घाँटीमा असर गर्छ । यसले घाँटीका मांशपेशी तथा कोशिकाहरुमा असर पर्नुका साथै संक्रमणको खतरा हुन्छ ।
शरीरमा पानीको कमी भएको कसरी थाहा पाउने?
Don't Miss it के तपाईको खुट्टा निदाउने, गन्हाउने र दुख्ने गर्छ ? यी उपायहरु अपनाउनुहोस् र सजिलै छुटकारा पाउनुहोस्
Up Next व्यावसायिक रुपमा बाख्रा पालन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? समय दिई यो पढ्नुहोस